Izixhobo zeJografi ezilungelelaniswe neMephu yeBentley -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Izixhobo zeendawo eziguqulelwe kwiBentley Imephu
Izixhobo zeendawo eziguqulelwe kwiBentley Imephu
Kwiintsuku eziliqela ngoku ndibe ndithetha nge-BentleyMap, kutshanje saqwalasela ukufuduka yolwazi kunye nokwenzeka kokuzenzekelayo inkqubo, kulo mzekelo siza kubonisa umzekelo wokwenza ngokwezifiso izixhobo zeGraphics ezifunekayo kwaye esizifunayo xa saqala ukusebenza xfm.
Phambi Bentley Imephu ukuphuma kule nkomfa scheme 2004 xfm kwanikezwa eyenye apho behamba kodwa zange umsindo njenge ezintle nguMlawuli Geospatial kwakubonakala kunzima kangaka njengangoku. Emva kokubona ukusebenza kwayo, sinethuba lokuhlala phantsi kwaye sicinge ukuba kunokwenzeka njani ukudibanisa i-xfm ngaphandle kokushiya iJografi kwaye ukusuka apho iprojekthi enomdla yazalwa endiza kuthetha ngayo ngomnye umzuzu. Kule meko, ndifuna ukugxila kwinto yokuqala esiyenzileyo xa umnqweno wezixhobo zeJografi wawungekho ndawo kwiBentley Map, sayenza ngenkqubo esandula ukuphumelela kwiYunivesithi yamaKatolika kunye nomyalelo olungileyo we .net.
Izixhobo ezingabalulekiyo zeGraographics.
Ingxaki ngemephu yeBentley kukuba ishiye eminye imisebenzi yeJografi, umsebenzisi angayifumaniyo ukuyisombulula (hayi ngendlela yesiqhelo). Ukuba uyayijonga, zisisiseko, yiyo loo nto ubuthathaka obukhulu beMephu yeBentley, engenazo iindibano ezilula kakhulu kodwa ezinye izixhobo ezomeleleyo zinazo kwaye ukuba kunjalo, zifihlakele kakhulu nakubasebenzisi bangaphambili. Makhe sibone ukuba zeziphi ezi zinto:
Le vidiyo inokukhutshelwa kwi-geofumed, imifanekiso engezantsi ithathiwe kuyo. Uphuhliso lwaluku-.net, iprojekthi ikwiJografi 8.5 kwaye isiseko sedatha sasiyi-Oracle 9.
Le bhar elula ivumelekile ukuguqula izinto ezibonakalayo ze-dgn kwizinto ezidibeneyo kwiprojekthi ngokusebenzisa itafile yesetyenzisiweyo, kodwa i-Bentley Map ayizange ifake nantoni na ngayo, ngoko ke siyayilungisa kwakhona:
Inketho yokukhethwa ngokukhetha udidi, uhlobo kunye nesici, oku kusombulula oko senze ngezinto ezisetyenziswayo / umphathi wenkampani.
Kwakhona iqhosha elingaphantsi livumela ukwenza ukhetho olusekelwe kwinto esele ikhona kwaye enye ukuya kwesabelo somsebenzi osebenzayo kwizinto enye okanye ngaphezulu.
Emva koko kwiphepha lesecaleni ezinye izixhobo zafakwa ukuba zibone iinkcukacha zento kwaye zisuse, yiloo nto esaziwayo njengento esazi ngayo.
Isixa siphendululwe, ngaphandle kweenguqu eziphambili (ezingasetyenziswanga), imiyalelo ye-5 yokusingatha impawu ixazululwe.
Ngamaxesha onke kwipaneli esekunene, kwabekwa iqhosha ukuze lifake ulwazi lwejiyometri, xa ukhetha into iphakamisa iphaneli ekuvumela ukuba ukhethe into esifuna ukuyivuselela: indawo, umjikelezo, ubude okanye uluhlu lolungelelwaniso. Oku kwenziwa kwiJografi kunye nohlaziyo lwedatha / yendawo-yeerimeter-yolungelelwaniso
Kwaye iqhosha lokugqibela lenziwe ukutshintsha idatha phakathi kwento enye kunye; uyayibuza ukuba idatha iyatshintshwa.
Ngokwembonakalo, okanye into eyayibizwa ngokuba ngumphathi wokubonisa kwiJografi, ukusebenza koku kwaphuhliswa kwisicelo esinye, phantse njengoko kwenzekile indawo. Apha banako bukela ividiyo.
Ukuba uqaphela, luluhlu lweendidi, kunye neempawu zazo kunye namaqhosha ukucima, ukuvula, ukukhetha okanye ukukhetha yonke into. Ngokhetho olongezelelekileyo lokukhetha umbono.
Ngokwazi kwam, ibiyenye yamanyathelo okuqala okuphumeza kwi-xfm, ngo-2005, ngaphantsi konyaka emva kokuba uBentley eyinikele kwinkomfa ka-2004 e-Orlando. Okwangoku iBentley wenza ukukhuthazwa sakho sixhobo esitsha esenza ukuba abasebenzisi bashiye i-Geographics.
Ngaba sigqiba? Ngexesha leBentley Imephu ivumela ukuphuhlisa kwi-VBA kunye nokwenza phantse nawuphi na umntu, oko uBentley akwenzayo ngokulibala oko abasebenzisi bakhe basebenziselwa ukwenzayo akwanele. Kwimeko yethu, sasinabathuthukisi be-geofumados kweli nqanaba, kodwa akusikho "ngaphandle kwebhokisi" isofthiwe kufuneka ikhuthaze ukuba ifuna ukuzinzisa.
Bentley Systems Dgn egeomates My
gvSIG 1.9 kunye ne-2.0 ezinzile ngoJulayi noSeptemba
Inkqubo yokusebenza kakuhle
Xa ndiya kumaThuluzi andifumananga ukhetho lweGeographics. Ndizama ukuthumela kuma-kml
Kungenzeka ukuba awusebenzisi i-Geographics, kuphela i-microstation.
Enye inokwenzeka kukuba i-Geographics ayifakwanga kakubi.
Andiyifumani inketho ye-Geographics xa ndifika kwiZiko. Ndizama ukuthumela kuma-kml.